Nyi Mu Yar: IRAS အခွန်ကို GIRO နှင့် ပေးချေခြင်း
at Friday, May 22, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar
ဒီလထဲမှာ စင်ကာပူ အခွန်ဦးစီး (IRAS) ကနေပြီးတော့ Income Tax အခွန်တွေ စတောင်းနေပါပြီ။ အများအားဖြင့် ရှေ့လ မကုန်ခင် အခွန်ပေးဆောင်ဖို့လည်းနိုးဆော်ထားပါတယ်။ စင်ကာပူ အစိုးရ ကိုရော မြန်မာအစိုးရကိုပါ အခွန်ထမ်းရတဲ့ စာရေးသူတို ့အဖို ့ကတော့ သိပ်မချောင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သိကြတဲ့ အတိုင်း စလုံးအစိုးရကို ပေးရတဲ့ အခွန်က နည်းပါတယ်။
ပေးရတဲ့ အခွန်က နည်းတယ်ဆိုပေမယ့် လည်း ငွေအပိုသိပ်မရှိတတ်လို့ များသားလို့ဆိုရမလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလမကုန်ခင် DBS ဒါမှမဟုတ် POSB ဘဏ်အကောင့်ရှိသူတွေအတွက် GIRO နဲ့ ၁၂ လပိုင်းဖြတ်ပြီး အခွန်ကို လီပြီး သွင်းနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို ပရိုမိုးရှင်း လုပ်နေပါတယ်။ သံရုံးကို နှစ်စဉ် ပေးရတဲ့ အခွန်ထက် နည်းတဲ့ အပြင် အခုလို လစဉ်ပိုင်းပြီး သွင်းနိုင်လို့တော်သေးတယ် လို့ဆိုရမလိုပါပဲ။ တခါတည်း လုံးခနဲ ပေးရတာ ထက်စာရင် အခုလို လစဉ် ပေးရတော့ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ပေးနိုင်တာပေါ့။ သိလိုသူများ ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလင့်ခ်မှာ သူတို့ပြောထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပြီး ပေးရမယ့် လစ်မစ် (Payment Limit) ကို သုည သာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် IRAS ရဲ့ အတည်ပြုမှုကို စောင့်ရုံပါပဲ IRAS က အတည်ပြုပြီး စုစုပေါင်း ကျသင့်တဲ့ အခွန်ကို ၁၂ နဲ့ စားပြီး လစဉ် ငွေဘယ်လောက်ကို ဘယ်ရက်မှာ ဖြတ်မယ် ဆိုတာ လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်သွားတာကို ကိုယ့်အခွန်ငွေကို ကြည့်လို ့ရတဲ့ IRAS mytax portal အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ လစဉ် ပိုင်းဖြတ်ငွေကို ပေါ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူက အရင်နှစ်က အခွန်ကို တခါတည်း လုံးခနဲ့ ပေးလိုက်ပြီးမှ နောင်တရလို ့၊ ဒီနှစ်တော့ GIRO နဲ့ ပိုင်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ရုတ်တရက် လုပ်နေမကျလို ့သူငယ်ချင်း တယောက်ကိုတောင် လှမ်းမေးရပါသေးတယ်။
IRAS အခွန်ကို သက်တောင့်သက်သာ နဲ့ ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလျှက်
ကိုယ့်အတွက်၊သားလေးအတွက်၊ကျောင်းစရိတ်အကုန် claimလိုက်တာတော်တော်သက်သာသွားတယ်။POSB အကောင့်မရှိလို့ Gio နဲ့ပေးလို့မရဘူးထင်တယ်။
"You can now set up GIRO via iBanking and enjoy 12 months of interest-free instalments on your income tax payment. "
May I know does it mean after 12 months interest will apply?
dude, 12 months interest free means, IRAS will calculate your total tax divided by 12. after 12 months your tax will clear as payable balance will become 0.00
JuneOne, I think POSB/DBS and OCBC banks allow to pay IRAS by GIRO through their iBanking Services.
Thanksalots. Today I check my IRAS View Payment Plan and the installment is already settled.
that is my pleasure and within this week my Income Tax also approved by IRAS with Giro.